လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်းများ ချက်ပြုတ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး – သုတရသ
လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်းများ ချက်ပြုတ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေးကတော့ လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူတစ်သားတည်းပါဝင်ရပ်တည်ပေးနေသူတစ်ဦးပါ။သူမကတော့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ စိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်ခဲ့ရုံသာမက တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်
စားစရာများချက်ပြုတ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ ဖွေးဖွေးက သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ” ဦးလူမင်း ပါသွားပါပြီ…ဖွေးတို့လဲအချိန်မရွေး ပါနိုင်ပါတယ်.. ဘယ်သူလာဖမ်းဖမ်း CDM ဆက်လုပ်ကြပါ !တကယ် ထိရောက်ပါတယ် ရုံးမတက်ကြပါနဲ့တော့ !!!!အသက်ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်လေးတွေ လူကြီးတွေ အတွက်လဲ
ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ မျက်ရည်ကျရတယ် … ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီတခါ အမှန်တရား ကို အမှားတရားက နိုင်လို့မရဘူး… စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးပါစေ ! မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်နိုင် နိုးထနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ လက်ထဲ အမြန်ပြန်ရောက်ပါစေ! ကြောက်ခေတ်ကိုပြန်မသွားကြေး! ယနေ့ အလှူ ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း ၁၄၄ ပွဲ!
I hope that People don’t react and can get some help from international..Once people react with violence, military can announce the detainment and willGet worse…အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်!!!!!!အကြမ်းမဖက် ဆန္ဒ ဆက်ပြမယ့် လူများ, CDM ဝန်ထမ်းများကိုလေးစားလျက် ….ဖွေးဖွေး” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြှီးရေ……။
ပရိသတျကွီးရေ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ဖှေးဖှေးကတော့ လတျတလောမွနျမာနိုငျငံမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားတှမှော ပွညျသူတှနေဲ့ အတူတဈသားတညျးပါဝငျရပျတညျပေးနသေူတဈဦးပါ။သူမကတော့ လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော စိတျအားထကျသနျစှာပါဝငျခဲ့ရုံသာမက တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနပွေီး လူထုလှုပျရှားမှုမှာပါဝငျတဲ့ပွညျသူတှအေတှကျ စားစရာမြားခကျြပွုတျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာဆိုရငျတော့ ဖှေးဖှေးက သူရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ” ဦးလူမငျး ပါသှားပါပွီ…ဖှေးတို့လဲအခြိနျမရှေး ပါနိုငျပါတယျ.. ဘယျသူလာဖမျးဖမျး CDM ဆကျလုပျကွပါ !တကယျ ထိရောကျပါတယျ ရုံးမတကျကွပါနဲ့တော့ !!!!အသကျပေးဆပျခဲ့ရတဲ့ လူငယျလေးတှေ လူကွီးတှေ အတှကျလဲ ကွိတျမနိုငျခဲမရ မကျြရညျကရြတယျ … ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ
ဒီတခါ အမှနျတရား ကို အမှားတရားက နိုငျလို့မရဘူး… စဈအာဏာရှငျကဆြုံးပါစေ ! မွနျမာပွညျသူပွညျသားမြား ငွိမျးခမျြးစှာ အိပျနိုငျ နိုးထနိုငျတဲ့ ခေါငျးဆောငျကောငျးတှေ လကျထဲ အမွနျပွနျရောကျပါစေ! ကွောကျခတျေကိုပွနျမသှားကွေး! ယနေ့ အလှူ ထောပတျထမငျးနဲ့ ကွကျသားဟငျး ၁၄၄ ပှဲ!
I hope that People don’t react and can get some help from international..Once people react with violence, military can announce the detainment and willGet worse…အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ!!!!!!အကွမျးမဖကျ ဆန်ဒ ဆကျပွမယျ့ လူမြား, CDM ဝနျထမျးမြားကိုလေးစားလကျြ ….ဖှေးဖှေး” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွှီးရေ……။
ဒုတိယမြောက် ရင်သွေးလေးကို ၂၂၂၂၂ နေ့လေးမှာ အောင်မြင်စွာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မိုးယုစံ
နေပူပူထဲမှာရေဆာလို့ ရေဗူးတောင်းကြတဲ့သူတွေကို အချိူရေဗူးများ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ